လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ခွဲခြားသည့်စနစ်နှင့် Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps လိုင်းဆွေးနွေးမှု Phylogeography - စာတမ်းဖတ်ပွဲယေဘူယျ Cordyceps | မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဓာတ်ခွဲခန်း
နေအိမ် » ထိတှေ့
လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ခွဲခြားသည့်စနစ်နှင့် Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps လိုင်းဆွေးနွေးမှု Phylogeography - စာတမ်းဖတ်ပွဲယေဘူယျ Cordyceps
Cordyceps ပြတိုက် 2019-05-23 14:11
ယူနန်နှင့်မြေယာအသုံးပြုမှုအရှေ့ကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းရှိဇီဝအရင်းအမြစ်များပုံ 1. နိုင်ငံတော် Key ကိုဓါတ်ခွဲခန်း, ယူနန်တက္ကသိုလ်နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲယေဘူယျ Cordyceps ဓာတ်ပုံအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ
လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် - ယူနန်ပြည်နယ် Key ကိုဓာတ်ခွဲခန်းပဉ္စမအထပ်ကွန်ဖရခန်း၌အရှေ့မြေနှင့်ဇီဝသယံဇာတနိုဝင်ဘာလ 22, 23 မှ 2018, ဘဝကသိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့သည်တရုတ်ခူမှိုယူနန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, ယူနန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း, အစီစဉ်တစ်ခု generalized Cordyceps စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပ Paecilomyces ခွဲခြားသည့်စနစ်နှင့် Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps လိုင်း Phylogeography ဆှေးနှေးရနျ။
ဒါကညီလာခံ, 11 ကွဲပြားခြားနားသောပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ, သုတေသနဌာနအနေဖြင့်ဧည့်သည်များကိုဖိတ်ကြားတစ်ချိန်တည်းမှာ, ဇီဝဗေဒဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏လယ်ပြင်တက်ကြွစွာတင်းကျပ်စွာနှင့်နွေးထွေးသောတွေ့ဆုံ, ယူနန်တက္ကသိုလ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။
နည်းလမ်းများဘဝကသိပ္ပံအဖွဲ့ Cordyceps သုတေသနကျောင်း, ယူနန်တက္ကသိုလ် morphological နှင့်မော်လီကျူးစနစ်တကျပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း, တရုတ်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်တမ်းနီးပါးနှစ်ပေါင်း 20 ကြောင်း Cordyceps 350 ကျော်မျိုးစိတ်တွေ့ထက်ပို 18000 မိတ္တူ၏ Cordyceps နမူနာထုတ်လုပ်ထက်ပိုမို 7000 မျိုးကွဲအထီးကျန်ဖြစ်အောင်ထားပြီး, Cordyceps ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြတိုက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ပုံ 2. တိမ်တိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက် Cordyceps ပြတိုက်
ညီလာခံအကြောင်းအရာများ 1, လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces အနေအထားကိုခွဲခြားသည့်စနစ်
လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces Paecilomyces hepiali Q.T. ချန် & R.Q. ဒိုင်ဖြစ်သူ R.Q. ဒိုင် et al ။ 1982 ခုနှစ်တွင်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာသုတေသနအင်စတီကျု၏တရုတ်အကယ်ဒမီ Is, Cordyceps sinensis တစ်မှို Deqin ကောင်တီ Baima နှင်းတောင်တန်းဝယ်ယူနေခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ အစဉ်အလာသဘောအရ Paecilomyces, တကယ်တော့သူ့ရဲ့ခွဲခြားအနေအထားကိုဆိုင်းငံ့ခွဲခြားယူနစ်ပိုငျဆိုငျအပေါ်အခြေခံပြီးလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces lilacinus အမည်ရှိတဲ့ကျယ်ပြန့် Paecilomyces Paecilomyces sensu lato ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ် taxonomy ၏အမွငျကိုနှိပ်, Paecilomyces ထားပြီး genus နာမတော်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်မှားနေပါသည်။ အရပ်သားပါပဲအသုံးအနှုန်းများမှာလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ယင်းပိုင် "အနက်ရောင်အိမ်ထောင်စုပေါင်း။ "
3. သ hepiali Paecilomyces အထီးကျန်နှင့် Microstructural လက်ခဏာ
သဘာဝကလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces Cordyceps sinensis, pharmacological သက်ရောက်မှုဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, 1993 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားမူပိုင် applications များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကုန်ကြမ်း Medica တရုတ်အကယ်ဒမီအင်စတီကျုခွဲခြာ Qinghai Hualong လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces CS-4 မျိုးကနေရယူခံရ, 1987 ခုနှစ်, Jinshuibao ဆေးတောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဆေးခန်းကျောက်ကပ်ချို့တဲ့မှုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးတရုတ်အမျိုးသားရေးလူတန်းစားအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် သန့်စင်ပြီးဓါတ်ငွေ့မရှိခြင်း, ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ပန်းနာရင်ကြပ်, lassitude, အိပ်မပျော်, မေ့လျော့အားနည်းခါး, မမှန်ရာသီ, ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်; နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်, နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာမလုံလောက်, hyperlipidemia, အသည်းအသည်းခြောက်, ယခု Jiangxi ဂျီ က Man Group မှယုံကြည်ကစော်ဖောက်ခြင်း, 10 ယွမ်ဘီလျံ၏ 2017 နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးရေဘဏ္ဍာကိုနှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်။ ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးမျိုးစိတ်ရှိသည်ဖို့ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောကြောင့်သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုခွဲခြားသည့်စနစ်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်, ထိုလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ရေရှည်တည်တံ့နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အသုံးပြုမှုအကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
အစောပိုင်းလေ့လာမှုများပြုလုပ် Paecilomyces hepiali Fenbang ရောင်ခြည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မော်လီကျူးပာအတွက်အလွန်အမင်းအလားတူ Spore shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အကြံပြု, နှစ်ဦးစလုံးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ Dairu Qin et, မျိုးစိတ်အသစ် Paecilomyces hepiali ဖော်ပြ Spore မက်ထရစ်အတွက်ရောင်ခြည်အနီးကပ် Fenbang အထူးဖော်စပ်ထား၏ဤအမျိုးအစားအကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ် conidiophore shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပုံစံအစိမ်းရောင်အဆင့်ဆင့်နှင့် conidia အပေါ် phialide နှင့် phialide များမှာ မကျင့်။ ကြီးမြတ်စီးပွားရေးတန်ဖိုးတစ်ခုမျိုးစိတ်သကဲ့သို့, အနေအထားကိုခွဲခြားသည့်စနစ်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်ပိုပြီးသတိထားရပါမည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအထက်ကိစ္စများအဘို့, အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတစ်စုဆွေးနွေးမှုများ, အဓိကကိစ္စရပ်များနှင့်ကောက်ချက်များ၏ကနဦးဖွဲ့စည်းနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces နှင့် Fenbang ရောင်ခြည် Spore Isaria farinosa မဟုတ်အတူတူပင်မျိုးစိတ်ကိုအတည်ပြုရန်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ဆှေးနှေးခအုပ်စုကိုပြီးနောက်ကြောင့်လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင်ရန်အကြံပြုသည်၎င်း၏ဆက်စပ်မျိုးစိတ် Samsoniella ထည့်သွင်းပိုင် Paecilomyces, ထိုလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces Samsoniella hepiali အမည်ပြောင်း နှင့်၎င်း၏တရုတ်အမည်ဖြင့်ကြောင့်သင်တန်းထုတ်ဝေခံရဖို့, လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင်ခူမှိုပြောင်းလဲခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်နယ်ပယ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအလိုက်အထိုက်နေတတ်ခြင်း, ကျယ်ပြန့်သဘောသဘာဝ၌တွေ့မျိုးစိတ် related ။ Paecilomyces hepiali တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မျိုးစိတ်များ၏ phylogenetic tree ထဲမှာအသေးစိတ် morphological နှင့်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၏ monophyletic အုပ်စုတစ်စုဖော်ထုတ်ခြင်းဖော်ပြထား poly ။ အဆိုပါခွဲခြားများ၏အနေအထားကဆုံးဖြတ်ခံရဖို့ P. လင်းနို့နောက်ထပ်ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အသုံးချနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces Cordyceps sinensis မျိုးရိုးဗီဇ, transcriptome ၏နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု, metabolome, ဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားအလားတူအဆိုပါလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces Cordyceps အလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင်က၎င်း၏ affinis မျိုးစိတ်နှိုင်းယှဉ် Genomics နှင့်လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces နှင့်အသစ်အရင်းအမြစ်များ transcriptomics လေ့လာမှုများ, အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Paecilomyces, ကကျယ်ပြန့်အလားအလာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ညီလာခံအကြောင်းအရာများ 2, လိုင်း Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps မျိုးစိတ်မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ Phylogeography
Cordyceps ပထဝီတည်နေရာနဲ့ဖြန့်ဖြူး 5. ကုန်းပြင်မြင့်
ထိုဒေသတွင်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့မျိုးစိတ်ဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်တက္ကသိုလ်တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်ထပ်တလဲလဲ, ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မား, ထပ်ခါတလဲလဲအတွေ့အကြုံနှင့် Quaternary glacial, interglacial လောကဓာတ်မပြုလုပ်ရပါ။ sub-မျိုးစိတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်မျိုးစိတ်သူ့ဟာသူအချက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရှေးဟောင်းပထဝီနဲ့ရာသီဥတုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယန္တရားများ, ပေါင်းစပ်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့်နေကြသည်။ Cordyceps sinensis နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မျိုးစိတ် Cordyceps လိုင်းမျိုးစိတ်မတူကွဲပြားမှုသို့မဟုတ် Single-line ကို၏ Multi-line ကိုလွတ်လပ်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မူလအစဝေါဟာရတစ်ခုတည်းဘုံဘိုးဘေးဖွဲ့စည်းရန်? အထူးဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင် Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်ဆင့်ကဲပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်သနည်း အဆိုပါဇီဝကမ္မအချက်များကြီးမားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုထားရှိရန်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အဘယ်အရာကို (အိမ်ရှင်လွှဲပြောင်းအပါအဝင်) အပြုအမူ, တစ်ချိန်တည်း, မတူကွဲပြားမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်လူတန်းစားအုပ်စုမှာ?
ယေဘူယျ Cordyceps site ကိုမြေပုံပေါ်တွင် 6. နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
အဆိုပါ Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps Phylogeography အထူးအစီရင်ခံစာအဘို့ပုံ 7. ဒေါက်တာဒေါင် Yong-မျိုးဆက်လိုင်း
(1) မျိုးစိတ် Cordyceps လိုင်းကုန်းပြင်မြင့်၏မတူကွဲပြားခြင်း
8. သ Cordyceps ပထဝီဖြန့်ဖြူးလိုင်းကုန်းပြင်မြင့်
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps sinensis နှင့်လိုင်းစနစ်၏ Cordyceps မျိုးစိတ်မတူကွဲပြားမှုဆွေမျိုးသားချင်း, ငါးမျိုးစုံ (Cordyceps sinensis Ophiocordyceps sinensis မူရင်းအစီရင်ခံစာ, အ Lanping လိုင်း Cordyceps O.lanpingensis, Emei လိုင်း Cordyceps O.emeiensis, စာကြည့်တိုက် Hiyoshi အပြင်, Cordyceps လိုင်း 13 မျိုးစုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့ ma Laojunshan လိုင်းနှင့်လိုင်း Cordyceps Cordyceps O.kurijimeaensis O.laojunshanensis), ခုနစျပါးမျိုးစိတ်အသစ် (အဖြူလိုင်း Cordyceps O.albastromata, Takayama လိုင်း Cordyceps O.alpina, ခါးသောလိုင်း Cordyceps O.amara, ဝါးလိုင်း Cordyceps O.bambusicola တွေ့ရှိခဲ့ , Cordyceps O.megala, အညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင်လိုင်းများ Cordyceps O.fusca အခြေစိုက်စခန်းလိုင်း Cordyceps O.nigristromata) နှင့်သစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမှုလိုင်း Liangshan Cordyceps O.liangshanensis ။ Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်လိုင်းကိုကနဦး Cordyceps များ၏မတူကွဲပြားထင်ရှားပါရှိပါတယ်။
ပုံ 9. Liang Zongqi ပါမောက္ခအစည်းအဝေးမှာပြောသော
(2) က၎င်း၏မှေးခငျြးမျိုးစိတ် Cordyceps sinensis pedigree ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်း
သ 10,13 မျိုး Cordyceps လိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာကုန်းပြင်မြင့်၏ Phylogeny
Cordyceps မျိုးစိတ်, Multi-ဗီဇ phylogeny (SSU, LSU, tef-1α, rpb1 နှင့် rpb2) အပေါ်အခြေခံပြီးရှင်းလင်းစွာလိုင်းစနစ်က taxonomic အခြေအနေနှင့် phylogenetic ဆက်ဆံရေး၏ 12 မျိုး (O.kurijimeaensis သေးမျိုးစုံမျိုးရိုးဗီဇ data တွေကိုရယူ) ။ Cordyceps Omei လိုင်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြင်, 11 နဲ့အခြားမျိုးစိတ်တူညီဌာနခွဲစုပေါင်းဌာနခွဲအဆိုပါ QTP Core Clade လိုင်း Cordyceps ၏ကုန်းပြင်မြင့် core ကိုအုပျစုမြားသတ်မှတ်ထားသည်။ Cordyceps ကုမ္ပဏီကြီးအပ်ချုပ် O.macroacicularis (ဂျပန်), Xuefeng လိုင်း Cordyceps O.xuefengensis (တရုတ်ဟူနန် Xuefeng တောင်), တောက်ပဝါယာကြိုး Cordyceps O.illustris (နှင့်အနောက်အာဖရိက: အ Clade မှာလိုင်းလည်း Non-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps ခြောက်မျိုး၏ဖြန့်ဝေတို့ပါဝင်သည် အာဖရိကတောင်ပိုင်း), Roberts သည်လိုင်း Cordyceps O.robertsii (သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်), လှိုဏ်လိုင်း Cordyceps O.karstii (တရုတ်ကွေးဂျိုး Chishui) နှင့်ဝင်ဆန်လိုင်း Cordyceps O.wenshanensis (တရုတ်ယူနန်ဝင်ဆန်) ။
ပုံ 11 ပါမောက္ခယုဝမ်အစည်းအဝေးမှာပြောသော
ဇာစ်မြစ်ကို (3) Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps sinensis နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မျိုးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်
ဇာစ်မြစ်၏ QTP Core Clade စင်တာမှ Hengduan တောင်တန်းတောင်ပိုင်းဒေသပြန်ဆောက်ဖို့က S-ရေငုပ် display ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူး၏ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Eocene ကာလ မှစ. - နွေးသမရာသီဥတုအမျိုးအစား - ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မားခြင်းနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားတောင်အပူချိန်ဇာစ်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးနောက်အနိမ့်အမြင့်၏တောင်ပိုင်းဒေသအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမတူကွဲပြားမှု, အဓိကအားဖြင့်သမဒစင်တာများ situ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Qinghai-တိဘက်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မားပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှု, မြေယာမိုဘိုင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, အမြင့်နဲ့ရာသီဥတု Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တိုးအတွက်ကွဲပြားမှု, မျိုးစိတ် Cordyceps လိုင်းများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုဘို့ပထဝီ, ဂေဟစနစ်မတူကွဲပြားမှုရာသီဥတုအခြေအနေတစ်ဥစ္စာဓနများကိုဤသို့အမျိုးမျိုး၏ဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြစ် ထိုအခါက high-မြင့် Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်နှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မားသဖြင့်လိုက်ပါသွားပတျဝနျးကငျြဧရိယာမှပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ရှည်လျားသောရွေးချယ်ရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေပြီးနောက်, တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်အစုလိုက် taxa အပြင်ဘက် O.karstii, O.wenshanensis, O.illustris, O.xuefengensis, O.macroacicularis နှင့် O.robertsii နှင့်အခြားဒေသများဖွဲ့စည်းရန်။
မျိုးစိတ်ဂီယာထင်ကြေး၏ပုံ 12 Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် core ကိုအုပျစုမြား
နှောင်းပိုင်း Miocene (~6Ma) တွင် Cordyceps အစုလိုက် taxa အအေးရာသီဥတု features တွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောင်းလဲတဲ့ကုန်းပြင်မြင့်ဖွဲ့စည်း, မြင့်မားကုန်းအားဖြင့်သက်ရောက်မှုပြီးနောက်ရှေးဟောင်းတိဗက်နှင့်တောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်၏အနောက်မြောက်ပိုင်းကျယ်ပြန့်ဒေသများရှိမျက်နှာပြင်ရန်ကုန်းပြန့်ပွားဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။
13. သ Cordyceps ဖြစ်နိုင်သောပျံ့နှံ့လမ်းကြောင်းကို
(4) အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ရှေးခေတ်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်များ Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်များအကြား Cordyceps sinensis နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မျိုးစိတ်နှင့် speciation အသင်းအဖွဲ့
14 Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်ခရိုင်မြေပုံ Cordyceps မျိုးစိတ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် Qinghai-တိဘက်လှုပ်ရှားမှုဘူမိဗေဒဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်များအကြားဆက်စပ်မှု
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်အချိန်နှင့်အမျှမော်လီကျူးနာရီချောင်ကွဲပြားခြားနားမှုမော်ဒယ်သုံးပြီး Cordyceps ကုန်းပြင်မြင့်အချိန်လိုင်း7နှင့်ရွေ့လျားမှု၏ကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှားသော၏ဒုတိယဖြစ်ပျက်မှု၏အဓိကဌာနခှဲကညွှန်ပြ, ခန့်မှန်းအချိန်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps လိုင်းများနှင့်၎င်း၏အိမ်ရှင်အုပ်စုများဖြစ်ကြသည် တစ်ချိန်တည်း။ ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသနှင့် Oligocene အကြံပြုခြင်းမျိုးစိတ် Cordyceps လိုင်းများ၏ကွဲပြားခြားနားမှု - Miocene (25-17 Ma) ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မားခိုင်ခံ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
ယင်းကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြင့်မားတိဘက်အကြားရှိပုံ 15 Cordyceps အိမ်ရှင် Hepialus အသင်းအဖွဲ့
(5) Cordyceps Phylogeography
ပုံ 16 Cordyceps sinensis မျိုးဗီဇတည်ဆောက်ပုံပထဝီအနေအထားအရနမူနာဖြန့်ဝေ
အဆိုပါ၎င်း၏မျိုးဗီဇမတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ Cordyceps sinensis Phylogeography 111 haplotypes ပေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အကြီးစားနမူနာအပေါ် အခြေခံ. (96 နမူနာလူဦးရေ 948) sequence ကိုပိုမိုတိကျသောမျိုးရိုးဗီဇမတူကွဲပြားမှုများနှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းလက္ခဏာများထုတ်ဖော် Cordyceps sinensis ဖွဲ့စည်းခဲ့စေခြင်းငှါ 8 တည်ငြိမ် phylogenetic နျဌာနခှဲ, နှင့်အနည်းဆုံးသုံးပထဝီအနေအထားအရတူသောဖြန့်ဝေရှိခြင်း။ ဒါ့အပြင်အနောက်မြောက်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်နှင့်တောင်ပိုင်းတိဘက် Cordyceps မျိုးဗီဇမတူကွဲပြားမှုများနှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားစင်တာ၌တွေ့။
ပုံ 17 လျူ Xingzhong သုတေသီသုတေသီယန် Zhu Liang, တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအဖြစ် domains များသုတေသီ Zhao နှင့် Yongchang အပေါင်းအဘော်တို့အစည်းအဝေးမှာပြောသော
ပုံ 18 Huxian Qi ပါမောက္ခပါမောက္ခ Zhang က Keqin နှင့်အစည်းအဝေးတွင်ပြောသောပါမောက္ခ Zou Chenggang ခဲ့ကြသည်
Penicillium ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင်များအတွက်အနေအထားကိုခွဲခြားစနစ်၏ဆွေးနွေးမှုအားဖြင့်အဆိုပြုထားအစည်းအဝေးပြုလုပ် Samsoniella genus ထည့်သွင်းလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces ရန်အကြံပြုသည်။ အရေးကြီးသောဆေးဖက်ဝင်တန်ဖိုးကိုအဘို့ဤလင်းနို့ကိုက်တတ်သောပိုးကောင် Paecilomyces နောက်ထပ်ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အသုံးချနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်အဝတိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်, မျိုးစိတ်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ၏ရှုပ်ထွေးသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအတွက် Cordyceps sinensis နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မျိုးစိတ်နားလည်ရန် multidisciplinary Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps လိုင်းဆွေးနွေးမှုအုပ်စုများ session-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, multidisciplinary နောက်ခံ၏မူဘောင်အတွက်ကူညီပေးသည် , ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုင်း Qinghai-တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် Cordyceps speciation နှင့်ဆင့်ကဲယန္တရား။